Umatshini wemaski kufuneka ulungiswe njani?
Abahluphekileyo baya kwamkela uyilo oluzenzekelayo ukunciphisa iimpazamo zabantu kunye nokunciphisa abasebenzi kunye nokonga iindleko ezininzi zabasebenzi. Nangona kunjalo, ukuba umgangatho wemveliso kukufezekisa isiphumo osifunayo kwimveliso ezenzekelayo, kuya kufuneka uhlengahlengise iiparameter zesixhobo, oko kukuthi, ukulungelelanisa i-equi ...
Ungawugcina njani umatshini wokugoba wokugoba
Ukuba sifuna umatshini wemaski usetyenziswe ngokutyibilikayo kwaye ube nexesha elide lokuphila, kubalulekile kakhulu ukwenza ulondolozo ngexesha elifanelekileyo. Ngokukodwa, kutheni le nto kufuneka senze ulondolozo oluqhelekileyo kumatshini wemaski kwaye zeziphi izibonelelo zolondolozo? Kukwakhankanyiwe nakwii-t ...
Uyigcina njani iibhetri ze-lithium-ion ezingasetyenziswanga ixesha elide
Ibhetri ye-lithium ion ibhetri esebenzisa i-lithium yesinyithi okanye i-lithium alloy njengesixhobo esibi se-electrode kwaye isebenzisa i-electrolyte engena-aqueous. Ngo-1912, uGilbert N. Lewis (uGilbert N. Lewis) wacebisa kwaye wafunda iibhetri zentsimbi ye-lithium. Ngama-1970, iWhittingham yacebisa kwaye yaqala ukufunda i-lithium ...
Indlela echanekileyo yokugcina ibhetri ye-lithium ion
1. Ibhetri ye-lithium-ion esandula ukuthengwa inamandla amancinci, ke xa umsebenzisi efumana ibhetri, inokusetyenziswa ngokuthe ngqo kwaye iphinde igcwaliswe kwakhona emva kokuba amandla aseleyo esetyenzisiwe. Emva kwama-2 ukuya kuma-3 amaxesha okusetyenziswa kwesiqhelo, ion lithium inokusebenza ngokupheleleyo. 2. Thintela ukutshaja rhoqo. Icharg efanelekileyo ...
Umahluko phakathi kweemaski zokuphefumla zevalve kunye neemaski eziqhelekileyo
Siyazi ukuba iimaski ngokubanzi zahlulwe zaziimaski ezisicaba, ukusonga iimaski, iimaski ezimile njengentlanzi kunye neemaski ezimilise ikomityi. Ukongeza, ngokweemathiriyeli kunye nokusetyenziswa kwendalo yeemaski, kuya kubakho amagama ahlukeneyo, anjengeemaski zekhabhoni ezenziweyo, iimaski zonyango, njl njl.
Incwadana yemiyalelo yomatshini wokufihla ubuso
Lo matshini wobuso obufihliweyo sisixhobo esidityanisiweyo esisebenza kakuhle, ikakhulu esisetyenziselwa ukuvelisa ngokuzenzekelayo iimaski zobuso ezithe tyaba ngaphandle komphetho (ngaphakathi) kunye neendlebe zangaphandle ezingaphantsi kwezine. Izixhobo zamkela uyilo lwesibini ukuya kolwesibini kwaye zisebenzisa itekhnoloji ye-welding ye-ultrasonic. Ine charac ...
Ukusilela okuqhelekileyo komatshini wokucoca indlebe we-mask
Iimpazamo eziqhelekileyo kunye nokuthintela umatshini we-mask indlebe ye-band band welding machine: 1. Isikhunta ngasinye kunye ne-transducer zixhotyiswe ngefeni, ukwenzela ukuba ukufudumeza ubushushu kubengcono. 2. Isibumbeko nevili le-welding kufuneka lihlengahlengiswe kwinqanaba, ukungalingani kuya kubangela ukuba i-welding ibuthathaka. ...
Ukuhamba komsebenzi komatshini wokugoba wokugoba
Umatshini wokugoba wokugoba, njengoko igama lisitsho, sisixhobo esisetyenziselwa ngokukodwa ukuvelisa iimaski ezisongelayo. Iyasebenza kwaye izinzile, izenzekelayo, kwaye igcina abasebenzi kunye nezixhobo. Zonke izixhobo zilawulwa yi-PLC. Sisixhobo sobugcisa obuphezulu kunye nobukrelekrele bokuvelisa. Imas elandelayo ...
Iimpawu zabaSenzi boMatshini bokuSonga iMaski
1. Isakhelo senziwe nge-aluminium alloy kunye ne-stainless steel, kwaye imbonakalo ilula kwaye intle ngaphandle komhlwa. 2. Ukubala okusebenzayo kunokulawula ngokufanelekileyo amandla emveliso kunye nenkqubela phambili yemveliso. 3. Ulawulo lokuguqula rhoqo lunokuhlengahlengisa isantya esisebenza kwizixhobo ngokomthetho ...
Umatshini wokugoba wokugoba
Umatshini wokugoba wokugoba, okwabizwa ngokuba ngumatshini we-C-uhlobo lwemaski, ngumatshini ozenzekelayo osetyenziselwa ukusonga umzimba wemaski. Isebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic ukubopha umaleko o-3 ukuya ku-5 wamalaphu e-PP angalukwanga, icarbon kunye nezinto zokucoca ulusu, kwaye usike imaski esongiweyo Umzimba unokuqhubekiswa ube ...
Abavelisi boomatshini bokugquma bazisa indlela echanekileyo yokunxiba iimaski ezima-ntathu
Abavelisi bemishini yokugoba imaski, nangona ukuqala kokwindla kudlulile, ubhubhane awukapheli. Ke ngoko, akufuneki siyithathe kancinci. Ngalo lonke ixesha khumbula ukunxiba iimaski xa uphuma. Ngoku iimaski kwintengiso ikakhulu ziimaski ezinamacala amathathu kunye neemaski eziqhelekileyo. Iimaski, ndi ...
Yintoni inkqubo yokuvelisa iimaski ngomatshini wokugoba?
Umatshini wokugoba wokugoba ikakhulu ngumatshini osebenza ngokupheleleyo osetyenziselwa ukuvelisa iimaski ezisongelayo. Iimaski zahlulwe zayimaski ethe tyaba kunye neemaski ezima-ntathu ukubonakala. Ngaba umatshini wokugoba wokuvelisa uzenza njani iimaski? Masiqonde kunye umatshini wokugoba wokugoba yinkqubo yemveliso ...